"Waxaa iisoo dhacday farriin ay soo dirtay saaxiibtay, balse 8 bilood kahor ayey dhimatay" - BBC News Somali
"Waxaa iisoo dhacday farriin ay soo dirtay saaxiibtay, balse 8 bilood kahor ayey dhimatay"
Image caption Mobile phone users in the US received messages sent in February
Qoraalladan waxaa lasoo diray maalinta jacaylka ee loo yaqaanno Valentine's Day, balse arrinta layaabka leh waxay tahay inay dadkii loo diray soo gaareen muddo 8 bilood ka dib ah.
Syniverse, oo adeegga isgaarsiinta siisa shirkadaha waaweyn ayaa eedda dhacdadan dusha ka saartay cillad la xiriirta "adeegga keydka gudaha".
Image caption Macaamiil badan ayaa cabashadooda ku muujiyay Twitter-ka
"Waxaa ii soo dhacday farriin ka timid lambarkii telefoonka ee saaxiibaddeydi aan ugu jeclaa, laakiin dhibka jira waa in ay geeriyootay bishii February", sidaas waxaa Twitter-ka ku qoray qof ka mid ah macaamiisha.
Qof kale ayaa soo qoray: "Farriin iska caadi ah ayaa xalay saacaddu markii ay ahayd 3am iga soo gaartay aabahay xaggiisa, taasoo uu ku leeyahay 'Waan ku jeclahay waana ku garab taaganahay mar walba', balse wuxuu markii dambe ii sheegay inuusan mar dhow farriintaas ii soo dirin, goor ay ahaydna uusan xitaa xasuusanin".
"Iyadoo cilladdii la xalliyay, waxaan hadda dib u eegis ku sameyneynaa habka uu u shaqeeyo qalabkeenna keydka gudaha, si aan u xaqiijinno in arrintanoo kale aysan mar dambe soo laabanin, waxaa kale oo aan si joogto ah ula shaqeyneynaa macaamiisheenna si aan uga jawaabno dhammaan su'aalaha ay qabaan", ayuu yidhi William Hurley, oo ah afhayeen u hadlay shirkaddaas.